सिंहदरवारका कर्मचारीमा आँखाको समस्या : सुख्खा हुने र चिलाउने
काठमाडौँ– विश्व दृष्टि दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संयुक्तरुपमा सिंहदरबार परिसरमा निःशुल्क आँखा जाँच शिविर सञ्चालन गरियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज शिविरको शुभारम्भ गर्दै आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिने जानकारी दिए । सो अवसरमा उनले आफ्नो आँखा जाँचसमेत गराएका थिए ।
सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव तथा मन्त्रालयका सचिव डा पुष्पा चौधरीले आँखा स्वास्थ्य सेवामा पछिल्लो समय नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी आफ्नो सेवासमेत प्रवाह गरिरहेको छ ।
सिंहदरवार परिसरमा रहेका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अाँखा जाँच गराउन अाएका थिए । आँखा शिविरमा जाँच गर्न आएकामध्ये अधिकांशका आँखा सुख्खा हुने र एलर्जीको समस्या देखिएको डा विनिता शर्माले जानकारी दिए ।
‘आँखा सेवा सबैका लागि, विश्व दृष्टि दिवस मनाआैं’ भन्ने नाराका साथ विश्व दृष्टि दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो । सन् २०२० सम्म उपचार तथा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनलाई २५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लिएको छ ।
विश्वबाट हटाउन सकिने अन्धोपनलाई सन् २०२० सम्ममा न्यूनीकरण गर्न सन् १९९९ फेब्रुअरीमा ‘भिजन २०२० : दृष्टिको अधिकार’ कार्यक्रम घोषणा गरी हरेक वर्ष अक्टोबरको दोस्रो बिहीबारलाई विश्व दृष्टि दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो ।
मन्त्रालयले अन्धोपन निवारण गर्न कार्ययोजना (सन् २००१–२०१९) लागू गरेको छ । नेपालमा एक लाख २० हजार मानिस दृष्टिीविहीन छन् । दश लाख २५ हजार मानिसमा उच्च तथा मध्यम दृष्टि दोषको समस्या छ । अन्धोपनाको ६६ प्रतिशत अन्धोपन उपचार गर्न सकिने खालका छन् । अन्धोपनका १६ प्रतिशत अन्धोपन रोकथाम गर्न सकिने खालका छन् । नेपालमा दृष्टि क्षमता कमजोर भएका मानिसमध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् ।
न्यून दृष्टिको मुख्य कारणमा दृष्टि दोष, मोतिबिन्दु र जलबिन्दु रहेका छन् । सन् २०१४ मा नेपालमा गरिएको पहिलो र ठूलो सर्भेक्षणमा ० दशमलव ०६ प्रतिशत बालबालिकामा अन्धोपन देखिएकामा ८० प्रतिशत बालबालिकाको उपचार गरेर अन्धोपन हटाउन सकिने भेटिएको थियो ।
अन्धोपनाका मुख्य कारण मोतिबिन्दु र यससँग सम्बन्धित ६५ प्रतिशत, आँखाको पर्दाजन्य रोग १३ प्रतिशत, आँखाको नानीमा हुने अन्धोपना छ प्रतिशत, जलबिन्दु पाँच प्रतिशत, दृष्टि दोष चार प्रतिशत र अन्य सात प्रतिशत रहेको छ ।
आँखाले टाढा वा नजिकको वस्तु स्पष्ट देख्न नसक्नु, धमिलो देख्नु, टाउको दुख्नु, आँखा सानो पारेर हेर्नु आदि दृष्टि दोषका लक्षण हुन् । यो समस्या जो कोही र जुनै उमेरमा पनि हुनसक्छ । आँखा धमिलो हुनासाथ सबैले नजिकको आँखा केन्द्रमा गई जचाँइहाल्नु पर्दछ । हरेक पाँच अन्धोपन भएका मानिसमध्ये चारको उपचार र रोकथाम सम्भव रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् ।
अनारका यी फाइदा बारे तपाइलाई जानकारी छ ?
धेरै केरा खाँदा पनि जान सक्छ ज्यान ? के हो वास्तविकता ?
तातो पानीले नुहाएको ठीक कि चिसोले ?
कब्जियत भगाउने ५ उपाय
घरिघरि बिरामी पर्नुहुन्छ ? यो कुरा खान थाल्नुस् !
वैज्ञानिक अनुसन्धानको निष्कर्ष - तुलसीको प्रयोगले निको हुन्छ यस्ता रोग